Vetivety dia ho afaka hamafa hafatra alefa amin'ny WhatsApp | Vaovao momba ny gadget
Vetivety dia ho afaka hamafa hafatra nalefa tamin'ny WhatsApp izahay
Rehefa nahazo ny vaovao momba ny satan'ny WhatsApp izahay, roa herinandro lasa izay, dia manana safidy hamafana ireo hafatra efa nalefanay akaiky kokoa noho ny hatramin'izay isika izao. Ity dia zavatra efa misy azontsika, ohatra, amin'ny fampiharana fandefasan-kafatra hafa toa ny Telegram ohatra, fa ny mpanjakavavin'ny fandefasan-kafatra dia mbola tsy manana ny safidiny ary amin'ny alàlan'ny kinova beta vaovao no nanehoana ny mety hamafana hafatra . indray mandeha nalefa. Toa izany efa miasa amin'ny beta 2.17.94 amin'ny sehatra ho an'ny Windows Phone ary mety hahatratra ny sisa amin'ny rafitra fiasa izay misy ny fampiharana, iOS sy Android.
Ity ny bitsika izay ahitanao ny kinova beta an'ny WP miaraka amin'ny safidy hamafana ireo hafatra nalefa:
WhatsApp beta ho an'ny Windows Phone 2.17.94: nanampy ny fampiasa «unsend»!
Halefa lavitra amin'ny endriny manaraka izy io. Mahareta. #hidden pic.twitter.com/7ygyZsxWz9
- WABetaInfo (@WABetaInfo) Diaben'ny 6 tamin'ny 2017
Ny fiasa dia ho azon'ireo mpampiasa rehetra te-hamafa hafatra ary hamafana ny hafatra, hiseho ny safidy rehefa manindry azy, izany hoe, amin'ity tranga ity ny mpandray dia hahazo fampandrenesana momba ny famafana azy. Ny filtration azo antoka fa miafara amin'ny maha-ofisialy azy hatramin'ny WABetaInfo Izy koa dia tompon'andraikitra tamin'ny "fanokafana ny boaty" ho an'ny tsaho momba ny fahatongavan'ilay toerana tena izy-na ny fampiharana na ny zava-baovao farany napetraka tao amin'ilay application, WhatsApp Status.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Software » Vetivety dia ho afaka hamafa hafatra nalefa tamin'ny WhatsApp izahay
Ny famantarana voalohany ny kinova manaraka an'ny macOS dia manomboka miseho
Ny fandefasana ny Moto Z amin'ity taona 2017 ity dia voasivana amin'ny Internet